Tsy Mety Mandefa Ny Fandaharana Manokan’ny Ambasadaoro Amerikana Teo Aloha Ny Fahitalavi-panjakana Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Desambra 2016 5:15 GMT
Satria feno tatitra momba ny “fahefana an-tserasera Rosiana” ny fampitam-baovao Amerikana sy ny “fitaovam-piadiana tonga lafatra” an'i Kremlin, dia diplaomaty nandao an'i Moskoa efa ho telo taona lasa izay ny iray amin'ireo kintana Amerikana goavana indrindra ao amin'ny tsingerim-baovaon'i Rosia ankehitriny.
Tamin'ny herinandro, niverina tao amin'ny lohatenim-baovao lehibe Rosiana i Michael McFaul, izay iray amin'ireo mpitsikeran'i Etazonia mafy indrindra tamin'ny fanafihana antserasera voalaza fa nataon'i Moskoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena Amerikana. Nipoitra imbetsaka tamin'ny fahitalavitra Amerikana ihany koa ity ambasadaoro teo aloha ity, miaro ny fananganana fanadihadiana mahaleotena “tahaka ny Vaomiera 9-11 (11 septambra),” ary tamin'ny lahatsoratra fanehoan-kevitra tao amin'ny Washington Post tamin'ny 10 Desambra izy nandrisika ireo mpanao lalàna Amerikana “hitolona” amin'ny ahafahana mampiditra ireo fampahalalam-baovao tantanin'ny fanjakana Rosiana ho ao anaty lisitra maintin'ny “mpitsikilo vahiny.” Ao anatin'ny Vanim-Potoanan'i Donald Trump, nisioka hatrany koa i McFaul ny amin'ny tokony hahafantarana bebe kokoa amin'ny fijirihana ataon'i Rosia amin'ny andrim-panjakana ara-politika Amerikana.
Voakiana sy voatsikera hatrany ao amin'ny Twitter, mbola nitozo nanentana ny olona an-tserasera nandritra ny taona maro i McFaul, indrindra tamin'ny naha-ambasadaoro azy aza. Tamin'ny Alahady, taorian'ny vaovao fa hanendry an'i Rex Tillerson ho Sekreteram-panjakana Amerikana manaraka ny Filoha voafidy Trump, dia nisioka hevitra vaovao i McFaul, niresaka tamin'i Margarita Simonyan, lehiben'ny tonian-dahatsoratra ao amin'ny Russia Today izy, mangataka mba hanolotra ny fandaharany manokana amin'ny fahitalavitra.
Angamba tokony handefa ny fandaharako manokana ao amin'ny @RT_com aho ? @M_Simonyan ?
Tamin'ny sioka manaraka, nampanantena “handefa CV” sy “asa maimaim-poana” i McFaul, raha mbola manaiky ireo fepetra sasantsasany ny Russia Today:
Mazava ny nolazaiko amin'ny fiaraha-miasa amin'ny RT. Hanao izany aho raha toa ka manana ny fandaharako manokana, mivantana sy tsy voasivana. (Hatreto tsy misy valiny)
Telo andro tatỳ aoriana, namaly tamin'ny vaovao mampalahelo i Simonyan. Tsy za-draharaha loatra ny Profesora Michael McFaul raha omena hanalotra fandaharana mivantana amin'ny fahitalavitra, hoy izy nanazava:
Tsy afaka omena fandaharana mivantana ny mpanolotra fandaharana tsy za-draharaha, ka tsy avela hamita-tena. Taona maro niasana tamin'ny fomba tsy azo kianina no ilaina vao mendrika omena fandaharana mivantana.
Tsy nety nanolotra fandaharana tao amin'ny tambajotra i McFaul rehefa tsy mahazo mivantana onjam-peo sy sary tsy voasivana ao amin'ny Russia Today. Na izany aza, Nilaza i Simonyan fa vonona hiresaka momba ny heviny mikasika ny tantaran'ny mpanamory iray:
Efa nangataka taminao aho mba hanao mpanamory. Mandehana. Miandry izahay. Sa mila fepetra manokana ianao?
Tao amin'ny Twitter, niaro ny fanehoan-kevitr'i Simonyan ny mpiasa sasany tao amin'ny Russia Today, fanehoan-kevitra milaza an'i McFaul mivantana fa tsy za-draharaha izy amin'ny “fitantanana fandaharana amin'ny fahitalavitra.” Ny hafa kosa naneso ny ambasadaoro, raha nilaza izy fa nipoitra tamin'ny fahilavitra nandritra ny 26 taona, ary efa niara-nanolotra fandaharana Rosiana tao amin'ny tambajotra RTR niaraka tamin'ny Andrei Bystritsky ihany koa aza nandritra ny taompolo 1990.
Raha toa mihatra manokana amin'ny fanolorana fandaharana mivantana amin'ny fahitalavitra ny fanamarihana nataon'i Simonyan momba ny fahazaran-draharaha, dia toa mifanohitra amin'ny fanapahan-kevitry Russia Today vao haingana amin'ny fitadiavana mpiasa tao ho ao ny fanizingizinany fa ilaina ny “taona maro niasana tsara” hanaovana ilay asa .
Ohatra, tamin'ny fiandohan'ity taona ity, nanome andiam-pandaharana antserasera manokana ho an'i Jeff Monson, tompon-dakan'ny haiady ny Russia Today, Tamin'izany fandaharana izany izy mampianatra ny mpijery ny “fomba fiarovan-tena amin'ny famelezana Amerikana” sy ny “fisorohana ny faharesena eo amin'ny ringin'ny fampahalalàna”. Amin'ny fandaharana fampahafantarana sasany, i Monson hita manao T-shirt mitondra maritoa sy antsy fijinjan'nyvanim-potoana Firaisana sovietika.
Tamin'ny taona 2012, nandefa ny fizaran-tantara faha-12 “The Julian Assange Show” (fantatra koa amin'ny hoe “Tontolo Rahampitso”) ny Russia Today, izay nanadihadian'ny mpijirika avy ao amin'ny Wikileak olona fanta-daza isan-karazany. Ity kifafa borosy voalohany tamin'ny fanolorana fandaharana amin'ny fahitalavitra ity no fiandohan'ny filazana mahazatra ankehitriny ao amin'ny fampitam-baovao Tandrefana fa iasan'i Assange toy ny “adala mahasoa” ho an'i Kremlin.
Manam-pahefana Rosiana iray, raha kely indrindra, dia ny Senatera Alexey Pushkov no nanatevin-daharana ny famelezana an'i McFaul tao amin'ny Twitter, raha nanoratra izy tamin'ny 14 Desambra fa tafahoatra ny fepetra notakian'ny ambasadaoro teo aloha hiasana ao amin'ny Russia Today. “Tahaka ny hoe mamela ahy hanolotra ny fandaharako manokana ao amin'ny tambajotran'izy ireo ny CNN,” hoy ny siokan'i Pushkov, mamerina indray ny fampitahana averimberin'i Moskoa matetika eo amin'ny tambajotram-baovaon'ny Russia Today tantanin'ny fanjakana amin'ny tambajotram-baovao tsy miankina miasa an'ny Cable News Network.